musha Products DataNumen Exchange Recovery Kusangana neNhamba Huru Yezvinhu Zvekupokana
Kusangana neNhamba Huru Yezvinhu Zvinopesana Mukuchinjana OST faira
Unosangana nenhamba huru yezvinhu zvekupokana mune yako offline fodhi (.ost) faira.
Iko kukanganisa kunoreva yako OST faira yakaora kana kukuvara.
Kugadzirisa kukanganisa uku uye kudzivirira kurasikirwa kwedata, ndapota tevera matanho ari pazasi:
Vhara Microsoft Outlook uye zvimwe zvinoshandiswa zvinogona kuwana iyo OST ikwidzwe.
Dzosera iyo data rekunze muiyo OST ikwidzwe. The OST faira rine dhata risingabvumirwe, kusanganisira maemail uye nezvimwe zvinhu zvese, mubhokisi rako reExchange, izvo zviri most kukosha kwauri. Kuchengetedza iyi data, unofanirwa shandisa DataNumen Exchange Recovery kuongorora iyo yakaora OST faira, dzoreredza iyo data mariri, wobva uvachengetera mune isina-kukanganisa Outlook PST faira kuitira kuti iwe ugone kuwana ese maemail uye zvinhu mukati meOptlook zviri nyore uye zvine mutsindo.
Gadzirisa kukanganisa. Ita shuwa kuti Exchange email email account marongero muAptlook akarurama, uye Outlook inogona kubatana kune yako Exchange server zvinobudirira. Ipapo restart Outlook uye tumira / gamuchira maemail ako pane inoenderana Exchange mailbox, inozoita kuti Outlook igadzire nyowani OST Faira otomatiki uye unganidza data rayo nebhokisi retsamba paSeva Yekuchinjana, kana nzira iyi ikasashanda, nhoroondo yako yetsamba ikozvino haina kunaka, unofanirwa kuidzima uye ugadzire imwe nyowani, seinotevera:
Tumira iyo data yakadzoserwa padanho rechitatu. Mushure meako OST dambudziko refaira rakagadziriswa, chengeta iyo nyowani OST faira yeiyo Exchange mailbox yakavhurika, uye wozovhura iyo PST faira inogadzirwa nhanho 3 neAptlook. Sezvo iine data rese rakadzorerwa mune yako yekutanga OST faira, unogona kuteedzera zvinhu zvinodiwa kune yako nyowani OST ikwidzwe.